Kalakhabar:: दिपाको रोचक प्रेम प्रशंग
१३—कातिक,काठमाण्डौ,राजकुमार राई । साङ्गीतिक फाँटमा राम्रै चिनिएकी गायिका हुन्– दीपा पन्त। ०६५ मा पहिलो एल्बमसहित साङ्गीतिक क्षेत्रमा देखिएकी उनलाई स्रोता माँझ ०६८ मा सार्वजनिक ‘दिलको बदला दिल दिए’ गीत तथा एल्बमले चिनायो । त्यसपछि लगातार गायनमा रमाउँदै आएकी दीपाको अहिलेसम्म चौथो एल्बमसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । नुवाकोटमा जन्मिएर त्यहाँको मनोरम प्राकृतिक छटासँगै हुर्किएकी उनी साङ्गीतिक प्रशिक्षणसहित यो क्षेत्रमा होमिएकी हुन् । गायनमा मात्र होइन, नृत्यमा पनि सिपालु उनले आफ्नो केही गीतमाथि बनेको म्युजिक भिडियोमा आफैले मोडलिङ गरेकी छन् । गुरु नरहरि प्रेमीको सल्लाहमा आफैले तयार पारेको ‘सोधिरहन्छ यो मन’ गीत पहिलो पटक रेकर्ड गराएकी दीपाले साथीहरूको लहलहैमा पप पहिलो एल्बम ‘रियालिटी’ बजारमा ल्याएकी थिइन् । एल्बम टिनएजरहरूले रुचाएपछि उनी स्टेज क्विनसमेत बन्न पुगिन् । ‘कालो गाजल’, ‘दिलको बदला दिल’ उनका बजारमा आएका अन्य एल्बम् हुन् ।
पछिल्लो समय ओझेलमा रहनुभएको हो ?
– केही समय भयो मेरो नयाँ गीत पनि आएको छैन । त्यसैले त्यस्तो लागेको हो । अर्को कुरो मिडियामा मात्र म नछाएकी हुँ । स्टेज कार्यक्रमहरूमा त व्यस्तै छु । मेरो नयाँ गीत केही दिनमा आउँदैछ । त्यसपछि फेरि मिडियामा छाउने छु ।
– केटी मान्छे भएपछि सौन्दर्यका लागि मेकअपतिर ध्यान दिनु नै पर्छ । तर मेरो यसमा धेरै इन्टे«स्ट छैन । मेरो अनिवार्य मेकअप भनेको आँखाका लागि गाजल हो । घरमा रहँदा र बाँहिर निस्कँदा गाजल लगाउन छुटाउँदिन । बाँहिर निस्कनु पर्दा लिबिस्टिक पनि लगाउने गरेकी छु । आँखामा सधैँ आमाले बनाएको गाजल नै लगाउँछु । फेसमा निभियको क्रिम कहिले काहीँ प्रयोग गर्छु । यो क्रिम मेरा लागि अमेरिकाबाट आउँछ ।
–सामान्य भएर हिँड्न रुचाउने केटी हुँ म । यो कुरा धेरैलाई थाहा छ । मलाई लामो ड्रेस, कुर्ता सुरुवाल र वान पिस बढी मनपर्छ । आफूलाई राम्रो लाग्ने पाइन्ट र टिसर्ट हो । अरूले मलाई राम्रो सारीमा देख्नु हुन्छ रे । मेरो हाइट केही कम छ । सारी लगाउँदा अग्लो पनि देखिन्छ भन्छन् ।
फिटनेस गर्नुहुन्छ ?
केही अगाडिम्म गर्थें । अहिले केही कम गरेकी छु । म आफै पनि एरोबिक सिकाउने गर्छु । मेरो खुटमा प्रोब्लम आएकाले केही समययता एक्सरसाइज गर्न पाएकी छैन । मैले घरमै फिटनेस क्लब बनाएकी छु । बिहान बिहान योगा पनि जान्छु ।
आफ्नै शरीरको कुन अङ्ग आकर्षक लाग्छ ?
–आँखा मनपर्छ । मेरो आँखा राम्रो छ, जस्तो मलाई लाग्छ । धेरैले पनि तिम्रो आँखा राम्रो छ । मनपर्छ भन्ने गरेका छन् । कतिपयले त मेरो आँखा बोल्छ । नभने पनि सबै कुरा बुझिन्छ भन्छन् ।
तपाईंको रोजाइको पुरुष नि ?
–आकर्षक पुरुष त जो कोहीले पनि मन पराउँछन् । मलाई त्यसले केही फरक पर्दैन । सोसियल छ, नबताईकन अर्काको कुरा बुझ्छ भने त्यो पुरुष मेरो रोजाइमा पर्छ ।
– धेरै छन् । राम्रो मान्छे बन्ने मेरो उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । नेपालमा पनि महिलाले कुनै पनि फिल्ड लिड गर्न सक्छ भनेर भन्ने मानसिकता आम मानिसमा विकास गर्ने बन्नु छ मलाई ।
– प्रेम धेरै जनासँग छ । आमाबाट सुरु भएको माया धेरैसँग धेरै तरिकाबाट बसेको छ । प्रेमी प्रेमीका बीचको माया पनि कोहीसँग केही पहिलेसम्म थियो । अहिले छैन ।
कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा प्रिन्सिपलको छोराले दिएका थिए । त्यसमा मेरो केही दोष थिएन । तर पनि घरमा आमाबुबाले गाली गर्नु हुन्छ भनेर निकै डराएँ । त्यो पत्र नपढी च्यातेर फ्याँकी दिए । पत्रको विषयमा अहिलेसम्म घरमा थाहा भएको छैन ।
कस्तो ठाउँहरू घुम्न मनपर्छ ?
–प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको ठाउँ मनपर्छ । धेरैले पोखराको बारेमा वर्णन गरेका छन् । अहिलेसम्म त्यहाँ पुग्ने अवसर मैले पाएकी छैन । कार्यक्रमको सिलसिलामा धेरै ठाउँ घुमेकी छु । तर पोखरमा कार्यक्रम परेको छैन ।